Folo volana latsaka herinandro izay no nitsanganan’ny Governemanta faharoan’ny Praiminisitra Ntsay Christian izay narafitra manokana ho taratry ny fisokafana sy ny fahaiza-manaon’ny zanaka Malagasy rehetra tsy ankanavaka, na ny eto an-toerana na ny avy any ivelany,
Tsy dia mikasika ilay vokatra loatra no tena maha lasa ny saina fa ilay fihetsika mianakavy mihitsy manoloana ny fiatrehana sy fihainoana didim-pitsarana toy ireny. Ekena fa nisy ny tsy fahatongavana vavolombelona. Nisy ihany koa fangatahana izay tsy neken’ny avy eo anivon’ny fampanoavana ka nahatonga horakoraka hila tsy hifandrenesana tao an-dapam-pitsarana. Araka ny lalàna dia tsy azo atao ny mihorakoraka na mitabataba anatin’ireny lapam-pitsarana ireny. Ankehitriny anefa dia efa zary tandra vadin-koditr’ireo mpanotrona ny fihorakorahana noho ny tsy fahafaham-po amin’ny didy mivoaka. Nitrangan’ny toy izany koa tamin’ny fitsarana ilay raharahana mpitarika hetsiky ny mpianatra eny amin’ny ambaratonga ambony, Jean Pierre Randrianamboarina ny taona 2015. Ny niantombohany dia tamin’ny taona 2002 izay nanambaran’ny filohan’ny HCC ny valim-pifidianana filoham-pirenena tamin’ny fotoan’androny. Dia ho tsinin’ireo vahoaka ve sa mariky ny tsy fahatokisana ny fitsarana sy fahaverezan’ny hasim-pitsarana eto amintsika ? Firenena inona loatra ?